hoco. မှ လက်လီအရောင်းမိတ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်သစ်အဖြစ် ananda (အနန္တ) နှင့် ပူးတွဲလုပ်ဆောင် | ananda
Home / သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ / hoco. မှ လက်လီအရောင်းမိတ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်သစ်အဖြစ် ananda (အနန္တ) နှင့် ပူးတွဲလုပ်ဆောင်
လူမှုဘဝနေ့စဉ်သုံး ဒီဂျစ်တယ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ ရောင်းအားသည် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ တိုးတက်လာခြင်း၏ ပြယုခ်အဖြစ်အရည်အသွေး ကောင်းမွန်သည့် hoco. အမှတ်တံဆိပ် လူမှုဘဝနေ့စဉ်သုံး ဒီဂျစ်တယ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် တစ်ဦးတည်း မူပိုင်ဖြန့်ဖြူးရေးရရှိထားသည့် Telecity Trading Co., Ltd သည် 4G+ ဒေတာအော်ပရေတာ ananda (အနန္တ) နှင့် ပူးပေါင်းလက်တွဲကြောင်း ယနေ့ကြေညာခဲ့ပါသည်။
ဈေးကွက်၏ လိုအပ်ချက်ကို သတိထားမိသော hoco. နှင့် ananda (အနန္တ) သည် ဒေတာများနှင့် လူမှုဘဝနေ့စဉ်သုံး ဒီဂျစ်တယ် ဆက်စပ် ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူသူများ အဆင်ပြေစေရန် “shop in shop” ပုံစံဖြင့် တစ်နေရာတည်းတွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်သည်။ hoco. အမှတ်တံဆိပ် လူမှုဘဝနေ့စဉ်သုံး ဒီဂျစ်တယ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် ananda (အနန္တ) ၏ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများကို ရန်ကုန်ရှိ ananda (အနန္တ) ၏ experience stores များတွင် လွယ်လင့်တကူ ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ထားခြင်းသည် ananda (အနန္တ) ၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို နောက်ထပ်အရှိန်မြင့်တင်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
hoco. ၏ Operations Manager ဦးဖြိုးဝေအောင်မှ “ဒီလိုလက်တွဲပူးပေါင်းလိုက်မှုက hoco. အတွက်ရော ananda (အနန္တ) အတွက်ရော တကယ့်ကို အဆင်ပြေပြီး အမြော်အမြင်ကြီးတဲ့ ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုပါပဲ။ ဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့် ရှေ့မှာ ဒီထက်ပိုပြီး အောင်မြင်နိုင် မယ့် အလားအလာတွေအများကြီး တွေ့နေရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးမြင့် လူမှုဘဝနေ့စဉ်သုံး ဒီဂျစ်တယ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို
ananda (အနန္တ) 4G+ ဒေတာဝန်ဆောင်မှုနဲ့ အတူယှဉ်တွဲပြီး ရောင်းချခွင့်ရတဲ့အတွက် အတိုင်းမသိ ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့ သည်။
Telecity Tradding Co., Ltd သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှစတင်၍ hoco. အမှတ်တံဆိပ် လူမှုဘဝနေ့စဉ်သုံး ဒီဂျစ်တယ် ဆက်စပ် ပစ္စည်းများကို တစ်ဦးတည်းမူပိုင် ဖြန့်ဖြူးခွင့်ရရှိထားသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ hoco. အမှတ်တံဆိပ် လူမှုဘဝ နေ့စဉ်သုံး ဒီဂျစ်တယ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှစတင်၍ စတိုးဆိုင်များတွင် စတင်တင်သွင်းရောင်းချခဲ့သည်။
သဘောတူစာချုပ်အသစ်အရ hoco. အမှတ်တံဆိပ် လူမှုဘဝနေ့စဉ်သုံး ဒီဂျစ်တယ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ananda (အနန္တ) ရုံးချုပ်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် experience store တွင် ယနေ့မှ စတင်၍ ဝယ်ယူရရှိနိုင်တော့မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဝယ်ယူလိုသူများသည် မိမိတို့ ကြိုက်နှစ် သက်ရာ အရည်အသွေးမြင့် hoco. အမှတ်တံဆိပ် လူမှုဘဝနေ့စဉ်သုံး ဒီဂျစ်တယ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ဈေးနှုန်းအမျိုးမျိုးဖြင့် လွယ်လင့်တကူ တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ hoco. မှ ထုတ်လုပ်ရောင်းချသော လူမှုဘဝနေ့စဉ် သုံး ဒီဂျစ်တယ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများမှာ Power Bank များ၊ headphone များ၊ earphone များ၊ car charger များနှင့် cable များ နှင့် car phone holder ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ၎င်းပစ္စည်းများ အားလုံးသည် ဆန်းသစ်လှပသည့် ဒီဇိုင်းမျိုးစုံဖြင့် သုံးစွဲသူ အကြိုက်တွေ့စေမည့် ပစ္စည်းများဖြစ်ပါသည်။
hoco. ၏ ဆောင်ပုဒ်တစ်ခုဖြစ်သော “သင်ချစ်သောအရာဖြစ်လာအောင်ဖန်တီးမည်” ဟူသည့် ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ hoco. အမှတ်တံဆိပ်သည် ၎င်းထုတ်ကုန်ပစ္စည်း၏ အရည်အသွေးအပေါ် များစွာအလေးထားသည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် ငယ်ရွယ်သူများ ကို ဦးတည်ထားသောကြောင့် hoco. ၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများသည် ရိုးရှင်းလွယ်ကူအသုံးဝင်ပြီး အရောင်အသွေးမျိုးစုံနှင့် ဒီဇိုင်းစုံလင်လှသည်။
ananda (အနန္တ) ၏ Head of Branding and Communication ဖြစ်သူ မစုမြတ်နိုးမှ “ananda (အနန္တ) ရဲ့ သန္နိဋ္ဌာန်က ananda (အနန္တ) အင်တာနက်သုံးစွဲသူတွေကို အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ ဒေတာဝန်ဆောင်မှုနဲ့
လိုအပ်တာတွေပံ့ပိုးပေးပြီး ဘဝမှာ ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နိုင်ဖို့ပါ။ အခုဆိုရင် ananda (အနန္တ) ရဲ့ ဒေတာဝန်ဆောင်မှုနဲ့ hoco. ရဲ့ ထူးခြားပြီးလှပတဲ့ လူမှုဘဝနေ့စဉ်သုံး ဒီဂျစ်တယ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများတွေကို သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ တစ်နေရာတည်းမှာတင် ဝယ်ယူရရှိပါပြီ” ဟု မှတ်ချက်ပြုပြောကြားခဲ့ပါသည်။
“shop in shop” ပုံစံဖြင့်ရောင်းချခြင်းကို စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှစတင်၍ စက်တင်ဘာ လကုန်အထိ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ဈေး ဖြင့် ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်အနှံ့တွင် hoco. အမှတ်တံဆိပ် လူမှုဘဝနေ့စဉ်သုံး ဒီဂျစ်တယ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ရောင်းချသည့် ဆိုင်များကို ဖွင့်လှစ်ထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၎င်း၏ ဈေးကွက်ကို ဆက်လက်ချဲ့ထွင်သွားရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။ hoco. အမှတ်တံဆိပ် လူမှုဘဝနေ့စဉ်သုံး ဒီဂျစ်တယ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ဗီယက်နမ်၊ ဟောင်ကောင်၊ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ မလေးရှား၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအဝင် နိုင်ငံပေါင်း ၅၀ ကျော်တွင် ရရှိနိုင် ပါသည်။
သတင်းအချက်အလက်များ ပိုမိုသိရှိလိုပါက https:// www.facebook.com/hococasemyanmar နှင့် www.facebook.com/ anandalivemore သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။
Download ananda presents The Gold Rush at Memory! festival
Download ananda partners with Wave Money